Boeing 737-800 Jet2.com compatibility 64-bit FSX & P3D fonosana
fanontaniana Boeing 737-800 Jet2.com compatibility 64-bit FSX & P3D fonosana
1 taona 5 volana lasa izay #1017 by Papy24
Salama ny ao.
Ity fonosana ity
Azo ampiasaina io fonosana io P3D V4?
Mametraka izany fanontaniana izany aho satria nanana olana tamin'ny Boeing 737 Classic Multi Livery Pack FSX & P3D ....
Raha ny marina, rehefa avy nametraka azy io, dia mamorona hadisoana izay asehon'ny fanakatonana P3D. Ary nitatitra tao amin'ny rakitra iray ny rakitra "ObjectLoadErrors.FLT". Nanala azy io aho, ary ankehitriny dia te-hahafantatra aho raha toa ka mifanaraka tsara ilay modely voalaza ao amin'ilay zavatra.
Vakio amin'ny manaraka.
1 taona 5 volana lasa izay #1019 by DRCW
Raha mbola mitohy ny tetezamita, jereo ny famaritana ao amin'ny tranokala alohan'ny handefasana azy. Raha milaza ny 100% mifanojo amin'ny V4 dia tokony hiasa tsara izy io, ny hany zavatra mety ho olana dia ny fandefasana rakitra feo. Ny antony dia nosoloan'ny xml ho an'ny 64 bit version ny dll. Raha vakiana ilay famaritana P3D 3 / 4 hotsapaina, dia midika izany fa izany. Ny jiro dinamika dia tsy miasa ho an'ny freeware hatramin'izao, koa mamadika izany fepetra izany, rehefa manidina fiaramanidina maimaim-poana. Rehefa nandeha ny fotoana dia azoko antoka fa hisy fanitsiana. Voamariko fa ny fiaramanidina miasa ao P3D V 3.4 dia toa mihodina amin'ny kely indrindra amin'ny bibikely
Fotoana mamorona pejy: 1.109 segondra